Manohy ny fiaraha-miasa mahomby ny Croatia Airlines sy Saber
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kroasia » Manohy ny fiaraha-miasa mahomby ny Croatia Airlines sy Saber
Croatia Airlines sy Saber Corporation, mpamatsy teknolojia ny indostrian'ny fizahan-tany manerantany, dia nanambara ny fanavaozana ny fiaraha-miasa efa hatry ny ela. Nampiasa ny vokatra fitantanana ny karaman'i Sabre nandritra ny efa-taona mahery ilay mpitatitra sainam-pirenena Kroaty ary miaraka amin'ity fanavaozana ity dia hanavao ny Saber AirVision Revenue Optimizer, vahaolana amin'ny fanatsarana ny vola miditra ao amin'ny orinasa Sabre.
Ao amin'ny tsena mandroso haingana sy mifaninana ankehitriny, ny fametrahana vidin'ny vokatra dia iray amin'ireo fanapahan-kevitra lehibe indrindra raisin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny vahaolana vahaolana amin'ny teknolojikan'i Sabre momba ny fidiram-bola dia manampy ireo zotram-piaramanidina handray fomba 360 degre amin'ny faminavinana, ny famakafakana ary ny fanamafisana ny làlan'ny fidiram-bolan'izy ireo, amin'ny alàlan'ny fanomezana ny fahitana amin'ny fotoana tena izy ny vola miditra amin'ny sidina rehetra, ny tsena rehetra ary ny daty fiaingana rehetra. Ny fanolorana ny vokatra dia natao hamelana ny zotram-piaramanidina hanao ny betsaka amin'ny fitehirizan-dry zareo ary hanampy amin'ny fanapotehana ireo silo data mety misy manerana ny orinasam-piaramanidina.
Ny votoatin'ny fitambaran'ny vokatra manontolo dia ny Revenue Optimizer, vahaolana amin'ny fitantanana vola miditra amin'ny fotoana maharitra izay ahazoana fanohanana manan-tsaina hanoroana ny fahazoana, miorina amin'ny fizarazarana, ny vinavinan'ny mpanjifa mifidy sy ny faharanitan-tsaina amin'ny fifaninanana. Ny fandalinana Saber dia naneho fa ny Revenue Optimizer dia afaka mampiakatra fidiram-bola hatramin'ny dimy isan-jato, ary koa mitondra fihenam-bidy lehibe amin'ny fotoana fanodinana. Ny Revenue Optimizer dia manolotra hevi-baovao momba ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny fampidirana tsy misy tomika miaraka amin'ny lisitra, ny saran-dalana ary ny vahaolana amin'ny fanatsarana ny vidiny. Mameno ny fonosana fanatsarana ny vola azo, dia ny Saber AirVision Revenue Integrity, izay manampy ny orinasam-pitaterana hitarika fidiram-bola fanampiny amin'ny famerana ny famandrihana olana sy ny fampitomboana ny fampiasana seza fiaramanidina.
"Mifantoka amin'ny fanomezana traikefa mpandeha premium izahay ary mora kokoa izany raha salama ny fehiny," hoy i Jasmin Bajić, filoha sady tale jeneralin'ny Croatia Airlines. “Ilaina ny fiarovana ny fidiram-bolantsika amin'ny alàlan'ny fametrahana ny vidiny marina ary ny fampitomboana ny isan'ny seza amidy. Ny vahaolana amin'ny fanatsarana ny vola miditra any Sabre dia zava-dehibe hanatanterahana izany amin'ny fanomezana antsika fahitana azo ampiharina mifototra amin'ny fangatahan'ny mpanjifa, ny tontolon'ny fifaninanana ary ireo anton-javatra maro hafa. ”
Mankalaza ny 30th tsingerintaona amin'ny 2019, Kroasia Airline dia mitazona tambajotram-pitaterana misy toerana 38 manerana ny firenena 24. Tamin'ny taona 2018, mpandeha 2,168,863 no nanidina mpandeha - fiakarana roa isan-jato raha oharina amin'ny taona 2017. Mpanohana matanjaka ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Kroasia amin'ny toerana fitsangatsanganana, izay nandray ny mpizahatany 18 tapitrisa mahery tamin'ny taona 2018.
"Tsy dia tsiambaratelo fa ny seranam-piaramanidina ara-barotra dia orinasan-fifaninanana tena mampiavaka ny fetra tery," hoy izy Alessandro Ciancimino, filoha lefitra, Sales Sales, Eoropa, Saber Travel Solutions. “Ny fahatsapana ny fotoana rehetra hanararaotana amin'ny fomba marani-tsaina ny fidiram-bola dia zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny zotram-piaramanidina maharitra. Faly izahay fa Kroasia Ny Airlines dia hanohy hampiasa ny vahaolana amin'ny fanatsarana vola miditra amin'ny indostria handrehitra ny fitomboany amin'ny ho avy. ”
Hotely Atwater: Fanovana ny fananana manan-tantara ao amin'ny Nosy Catalina
Inona no mahazatra eo amin'ny Birao fizahan-tany any Taiwan sy ny metro any Mumbai?